SomaliaReport: Kala qaybsani Cusub oo Ku Timid ASWJ
Kala qaybsani cusub oo dhaawici karta hawlgallada milatari iyo siyaasadda looga soo horjeedo ururka Al-shabaab ayaa la so gudbonaatay hoggaanka sare ee urur-diimeedka qunyar socodka ah ee Ahlu Sunna Wal Jama (ASWJ).
C/laahi Maxamed Nuur oo ah sarkaal sare o ka tirsan ururka ayaa sheegay in shaqadii laga eryey Maxamed Shuuriye oo ah afhayeenka ururka ASWJ ee ciidamada Muqdisho. Balse Shuuriye ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalkaas.
“C/laahi ma haysto awod iyo mudnaan uu aniga shaqada iiga eryo, ururka Ahlu Sunnah wuxuu leeyahay maamul dhisan, qawaaniin iyo xeerar wax kala haga. Arintuna ma aha mid shaqsiyadeed” ayu yidhi Shuuriye.
Urur-diimeedkan u nasab sheegta dariiqada Suufinimada taxaalufkana la leh dawladda ku meel gaadhka ah ayaa waxaa gobolada dhexe ee Soomaaliya kala soo gudboonaaday kilaaf keenay in boqolaal dagaalyahaniintiisa ahi ay ka so baxaan aagagga dagaalka kuna noqdaan Caabuqwaaq, ka dib markii la isku afgaran waayey qaybsashada hoggaanka iyo qoondaynta saanadaha hubka ah.
Sheekh Maxamed Faarax oo ah caalim ku nool Muqdisho ayaa u sheegay wargayska Somalia Report in kala qaybsanka cusub ee ururka ku yimid uu dhabarjab u keeni karo siyaasaddii guud ee ururka iyo dagaalka ay kala soo horjeedaan Al-shabaab.
“Khilaafkan ayaa isku baddali doona mid beeleed oo ka dhexeeya labada qabiil ee ugu muhimsan uguun wayn garbka ururka. Waxayna kala yihiin Habargidir oo ka tirsan beesha Hawiye islamarkaana ugu badan ururka qaybtiisa gobolada dhexe iyo Abgaal o ka tirsan beesha Hawiye uguna badan garabka ururka ee ka hawlgala Muqdisho” Sheekh Maxamed ayaa intaa sii raaciyey in arintaasi ay noqon doonto mid nasiib xumo ah.
“In kasta oo ay beelo kale ka tirsan yihiin ururka, ayaa haddana kala qaybsanka ku yimaadda labadan beelood ee waaweyn ayaa noqon kara mid keena in laba urur la kala samaysto.” Ayuu yidhi Sheekh Maxamed.
Garabka ururka Ahlu Sunna eek u sugan Muqdisho ayaa aaminsan in ay lahaayeen aasaaskii ururka isla markaana ay mudan yihiin in lo dhiibo hoggaaminta ururka, halka uu garabka kale ee ka hawlgala gobolada dhexe ka aaminsan yahay inay iyagu sameeyeen ururkan, loogana tanaasulo hoggaanka ururka.
Ururkan oo inta badan lagu eedeeyo inuu garab ka helo maamulka Itoobiya ayaa kaalinta ugu muhimsan ka hayey gobolada dhexe oo ay ka difaacayeen ururka Al shabaab.dhanka kalena dawladda ku meel gaadhka ah u ahaa laf dhabarta u suurogalisay in Al-shabaab lagala wareego magaalooyinka xuduudda dhaca ee gobolka Gedo. Al-shabaab ayaa iyadu muujisay dhaqdhaqaaqyo ay kaga faa’iidaysanayso kala qaybsanida ku timid ururkan, isla markaana weeraro ku qaadday saldhigga Ahlu Sunan ee gobolada dhexe.